Iindaba-Iimpawu kunye nokusetyenziswa kwethayile roller
Iimpawu kunye nokusetyenziswa kwe-tapered roller bearing
Ungayikhetha njani into efanelekileyo
Iimpawu iibheringi mqengqeleki tapered
Ukuzaliswa kwe-Tapered roller kuluhlu olwahlukileyo. Amakhonkco angaphakathi nangaphandle ebheringi anee-tapeways, kwaye iiroller ziyimilo yekona. I-roller kunye ne-raceway zihambelana nomgca, ezinokuthwala umthwalo osindayo kunye ne-axial, kunye nokuthwala umthwalo we-axial. I-angle enkulu yokunxibelelana, kokukhona inyusa indawo yokuthwala i-axial.
Uyilo lwe-roller tapered kufuneka lwenze umgca wokunxibelelana phakathi kwe-roller kunye nohambo lwangaphakathi nolwangaphandle lwandiswe kwaye luwele indawo enye kwi-axis ethweleyo ukuze iqonde ukujikeleza okucocekileyo.
Isixhobo esenziwe ngokutsha esine-tapered roller sithatha isakhiwo esiqinisiweyo. Ububanzi be-roller bonyukile, ubude be-roller bandisiwe, kwaye inani le-roller lonyukile. Ubungakanani bokuthwala kunye nobomi bokukhathala bokuthwala buphuculwe kakhulu ngokusebenzisa i-roller convex roller. Ukuqhagamshelana kunye nokuqhafaza kusetyenziswa phakathi kobuso obukhulu bokugqibela kunye nobambo olukhulu lwe-roller, oluphucula ukuthambisa.
Olu hlobo lokuzala lungahlulwa-hlulwa lube ngumqolo omnye, umqolo ophindwe kabini kunye nemiqolo emine ye-tapered roller bearing. Olu hlobo lokuthwala lukwasebenzisa iimveliso zasebritane.
Uhlobo Cage lokuzala roller tapered
Uninzi lweebheringi ezijikeleziweyo zenziwe ngeekheji zentsimbi ecinezelweyo. Nangona kunjalo, xa ububanzi bangaphandle bokuthwala bungaphezulu kwe-650mm, iikheyiji ezinemingxunya yekholamu ziyasetyenziswa.
Umqolo owodwa: ivili langaphambili, ivili elingemva, isixhobo somatshini wokujija, imoto ye-asi, isixhobo sokugaya, oomatshini bokwakha, oomatshini bokuphakamisa, oomatshini bokushicilela kunye nezixhobo ezahlukeneyo zokuncipha.
Umqolo kabini: isixhobo umatshini othini, kaloliwe kunye isitokhwe ukuziqengqa
Imiqolo emine: roll inkxaso